बालबालिकाको विश्वास कसरी टुट्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
बालबालिकाको विश्वास कसरी टुट्छ ?
यस्तो स्थितिमा उक्त बच्चा कस्तो मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको होला ? न उनी यो कुरा कसैसँग खुलस्त बताउन सक्छन् न मनभित्रै दबाएर बस्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ ? उनीसँग कुनै ठोस निर्णय पनि छैन ।
त्यसैले आमाबुवाले बालबालिकाको भविष्यका लागि पनि आफूलाई संयमित र सन्तुलित राख्न जरुरी छ । आफ्नो व्यवहारले उनीहरुमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यस कुरामा विचार गर्नुपर्छ । बालबालिका जन्माएपछि उनीहरुलाई खान र लाउन दिएर मात्र पुग्दैन । पढाएर मात्र पनि पुग्दैन । असल अभिभावकत्व पनि दिनुपर्छ । अनलाइनखबर बाट सभार